Amagumbi amabini amabini - ahlala kwindlu endala yelizwe - I-Airbnb
Amagumbi amabini amabini - ahlala kwindlu endala yelizwe
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguElsbeth
Indlu yelizwe le-9 i-4 km ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye nedolophana yase-Elgg emaphethelweni ehlathi. Ukuba uthanda ukuza kwindawo yam ufuna imoto okanye isimo esihle somzimba, kuba indlu ikwi-4 km ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye nelali. Akukho nkonzo yoluntu ekhoyo.
Uya kuyithanda indawo yokuhlala ngenxa yokuzola emva kosuku oluxakekileyo, indawo yangaphandle kunye nomoya omangalisayo.
Indawo yam yokuhlala ilungile kumaqabane, iintsapho ezincinci kunye nabahambi abahamba bodwa kuhambo.
Le ndlu yakhiwa phantse kwiminyaka engama-200 eyadlulayo kwaye igcine ubuntu bayo. Ikhitshi lifakwe kakuhle ngezinto ezahlukeneyo zokupheka - umzekelo, ukupheka kwisitovu esidala samaplanga! Iithayile zodonga ekhitshini kunye nakwigumbi lokuhlambela zingaphezulu kweminyaka engama-50 ubudala kwaye zinika amagumbi ukuchukumisa okungahambi kakuhle. Ifenitshala yale mihla kunye nendala ima ecaleni kwendlu yonke kwaye yenza umtsalane wayo ocacileyo. Amagumbi eendwendwe anefenitshala nje kodwa akukho nto isilelayo. Ukuba unesicelo esikhethekileyo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam nangaliphi na ixesha.
4.96 · Izimvo eziyi-245
Indlu imi yodwa ecaleni kwehlathi. Akukho bamelwane basondeleyo. Indlela eya endlwini idlula kwindlela yomhlaba kwi-200 m yokugqibela. Kwabo bafuna uxolo noxolo, yiparadesi encinci ...
Umbuki zindwendwe ngu- Elsbeth
Ngexesha lokuhlala kweendwendwe zam, ndonwabile ukuba ndifumaneke njengomntu onxibelelana naye.